Wasiirka Hawlaha Guud Boobka Uu Dhulka Ku Hayaa,Wuxuu Soo Dedejinayaa Guuldarada Xisbiga Kulmiye!!! | Hangool News
Wasiirka Hawlaha Guud Boobka Uu Dhulka Ku Hayaa,Wuxuu Soo Dedejinayaa Guuldarada Xisbiga Kulmiye!!!
Musuqmaasuqa iyo boobka baahsan ee lagu hantida dadwaynaha ayaa noqotay mid ku faaftay laamaha dawlada ee kala duwan,xaaladuna waxay u muuqataa qaatay qaado nin waliba wixii masuul looga dhigay ayuu siduu doono ugu tagrifalay.
Saadaal aan fiicnayn ayaa ka soo yeedhay wasaaradda hawlaha guud,gaadiidka iyo guryaynta somaaliland, oo sida la sheegay masuulka ugu sareeya wasaaradaas oo ah wasiir cali mareexaan ay haatan dul hoganayaan boob arxan darro ah oo uu ku hayo dhulkii danta guud.
Wasiir cali mareexaan wuxuu lunsaday hanti badan oo maguurto ah oo qarankani lahaa sifo sharciga baalmarsan.
Waa calaamad kale oo muujinaysa heerka musuq maasuq iyo boobka
lagu hayo hantidii ummaddu ay ka taagan yihiin xukuumada kulmiye oo masuuliyiintiisu ay caadaysteen inay akoono ku shubtaan lacagaha dadka danyarta ah cashuur ahaan looga qaado balse waxba loogu qaban. waa wax laga yakhyakhsoodo habdhaqanka ay haatan la soo baxday xukuumadani oo iftiiminaya qorshohooda ku talgal inuu ahaa inay ka shaqaystaan oo kaliya.
Meelaha dhibbanaha u ah xatooyada cali mareexaan waxa ka mid ah xerodhiigtii magaaladda burco oo dhowaan uu kawaanka saaray iibkeeda, arrintaas oo shacabku ka gadoodeen ayaa ilays u noqotay boobka wasiirkan oo bililiqaysi baahsan ku galaa bixiyey dhulkii danta guud.
Talada gebi dhaclaynaysa ee xukuumadda uu hoggaaminayo siilaanyo oo ku jirta wakhtigii kama dambaysta ahaa muddo xilleedkeeda ayaa qaaday olole musuq musuq oo ciddiyo ku dagaalan ah iyo xaalufinta hantidii qaranka.
Dhulka danta guud ee cali mareexaan xaraashayo,waxay ka mid yihiin asbaabihii horseedka u noqday inay afka ciidda darto,xukuumaddii daahir rayaale madaxweynaha ka ahaa iyo xisbulxaakimkii udub ka dib markii wasiirkii hawlaha guud ee xilligaas,siciid sulub iibiyey dhulkii hindiya laynka,arrinkaas oo kulmiye laftiisu cambaareeyey ayaa soo dedejiyey inuu xisbigii udub ku waayo taageero mug leh aakhirkiina sababtay inuu xisbigu guuldaraysto saaxada siyaasaddana ka baxo.
Dawladu inay iibiso dhulka maaha mid xaaraan ah laakiin waa inay u martaa sifo sharci ah ayna soo bandhigto iyadoo la waafajinayo xeerarka iyo shuruucda dalka u taal may dhicin in la horgeeyo golaha baarlamaanka.
Laakiin waxa ayaan darro ah in nin masuul ah uu si qarsoodi ah ku iibiyo dhul danguud ah sharcigana gacantiisa ku fushado,taasina waxay caqabad iyo nusqaan ku tahay haykalka dawladnimo iyo kalsoonida ay ummaddu u hayso madaxdooda iyadoo gebi ahaanba ay meesha ka sii baxayso kalsoonidii loo hayey xukuumaddan iyo xisbiga kulmiyeba.
Waxaynu aragnaa cali oo deeq gaadiid iyo agab kaleba guddoonsiinaya degaanno ka mid ah somaliland gaar ahaan kuwii looga codeeyey xilligu murashaxa ahaa balse dadweynuhu waxay moogan yihiin halka ay timaado, carruurtiisa ayaa kulliyado qiimohoodu aad u sareeyo wax ku barta kharashka baxadaas leh ma jirto ilo dhaqaale uga yimaado marka laga yimaado hantida qaranka iyo ku tiirsanaanta xukuumadda oo uu ka yahay dilaal qaraabo ahaan sedkiisa u goosta.
Horaa loo yidhi,cuquubo halkii lagu galay caw ku hurudaa,Dakanaddii iyo cuquubadii uu ka galay dadka masaakiinta ah waxay ka soo ifbaxday ubadkiisa oo mid ka mid ah ay kelli naafo noqotay qallin dibaddeed lagu sameeyey hase ahaatee dhibaatadaas la soo deristay may noqon mid uu ku cibro qaato kagana fogaado khiyaamada waayo xabiibkeennii (NNKH)ayaa yidhi “qofka wax khiyaameeyaa naga mid maaha”
Xikmad ayaa tidhaahda:
Hadduu culaysku bato fudayd baa ku xiga.
Haduu dulmigu batona,guul baa ku xigta.
Haduu habeenku dheeraadona,inuu waagu beryo ayaa la sugaa.
Abwaan qaasim oo qawaday dawladii lixdankii ayaa yidhi
Isma doorin gaalkaan diriyo darta kii galay’e.
Dalka waxa ka dhici doonta bisha Noverber13keeda,sida la filayo doorashadii madaxtooyada,waxa waajib ah in shacabku ka dhiidhiyaan dulmiga,caddaalada darada iyo boobka uu jideeyey xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waa inay shacabku hormuud u noqdaan isbedelka xididdada loogu siibayo xaaraan quutayaasha kulmiye iyo xulafadooda si dalka loo gaadhsiiyo horumar iyo badhaadhe wada gaadha somaliland.
Shacabku waa inay ka qayb qaataan halganka dalka lagaga samatabixinayo cannaasiirtan dal iyo dadba xaalufiyey
Waxaan kusoo gunnaanadayaa meeriso ka mid ah gabaygii cirsan ka yeedh ee1969 abwaan Axmed ismaaciil diiriye( qaasim) curiyey.
-carruuraha la dhacay awliyada laga cadhaysiiyey
-carshigaaba laga soo aqbalay cabashadoodiiye
-caawaa la kala soocayaa caabud iyo gaal’e
-Casho aan fogayn waxa isbedeli ciidan farawayne.
-Caaddaa rag go’ay buu nabsigu hoos u soo celine.
-Caanuhu dhowaan,way ka quban ciil dar loo qabaye.
-Inay currado khayr lihi kacaan ciidan la arkaaye.
-Ceeryaamo subaxeed nin nool cadarka roob moodye.
-Marse haddii cadceed lagu dhex daro wayska cidin ciide.
-Caloolyow aan kugu raagahayn ciida haw qodin’e.
-Cagta ii dhig waa kaa nabsigii soo cadceedsadaye.